Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » IBrand yaseMelika igcina iIndiya kwiRadar yayo eyiyo
Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Imifanekiso eqingqiweyo yoKhuseleko ibonwa kwi-Circle Line ferry, Manhattan, New York
Indawo yentengiso yehlabathi iBrand USA yahlukile ngeendlela ezininzi, ingeyiyo eyona incinci eyadluliselwa ngomyalezo ocacileyo kwaye ocacileyo kwabachaphazelekayo kwezohambo nakwezokhenketho eIndiya ukuba iUnited States izimisele ngokubuyisela imarike yaseIndiya, nje ukuba uhambo lubuyele endaweni, iposi COVID.
IBrand USA yaqhuba intlanganiso nge-11 ka-Agasti ka-2021, ehamba phambili nabantu baseIndiya kwezokhenketho.
Kwaqinisekiswa kwakhona yiBrand USA ukuba i-India ibisoloko ikwi-radar yayo.
Bobabini abameli base-USA nase-India balinde ngolangazelelo ukuya phambili kwezohambo, ukhenketho, ukuhamba ngenqwelomoya, ukubuka iindwendwe, nantoni na ofuna ukuyithiya igama.
Nditsho nangexesha le-COVID, i-USA igcine inkqubo yayo yokwazisa ukuba kuqhubeka ntoni e-India. Kwintetho eyabanjwa nge-11 ka-Agasti ka-2021, eyadibanisa, kwiqonga elibonakalayo, iinkokheli zokuhamba eziphezulu kunye nezokhenketho ezivela eIndiya, iBrand USA yaxoxa ngeenjongo zayo zokuthengisa kunye nokuthengisa iUSA eIndiya. I-Brand USA iphinde yaqinisekisa ukuba i-India ibisoloko ikwi-radar yayo, kwaye ababonisi entlanganisweni banike iinyani kunye namanani ukukhumbuza ababukeli ukuba iinombolo zaphambi kwe-COVID azizukufezekiswa kuphela kodwa zinokugqitha kubo.
Kwiphambi lokudityaniswa, izinto ziyaphucuka ngeenqwelomoya ezininzi endaweni, kwakhona, nje ukuba uye phambili uyeza. Amagosa aphezulu avela kwiBrand USA ayekhona ukuxelela abadlali baseIndiya ukuba kuninzi okufanayo phakathi kwamazwe amabini ukukhuthaza uhambo. Icala laseIndiya lale ntlanganiso ibikhokelwa nguSheema Vohra, okhokele ixesha elide e-US e-India.
Uqeqesho loRhwebo loKhenketho
Ngokusebenzisa i-Brand USA, ukuphumelela amabhaso Inkqubo yokuFumanisa yaseMelika inyuke nge-64% kuthelekiso lonyaka nonyaka. Le nkqubo ibonelela ngeebhayinari zemfundo nezikhuthazayo kwaye iqeqeshe iiarhente ezili-10,113 ukusukela ngo-2020 ukuza kuthi ga ngoku.
Ngo-2019, i-1.47 yezigidi Iindwendwe zaseIndiya waya kumava e-United States, enikela nge-14.2 yezigidigidi kuqoqosho lwase-US. Umthamo weendwendwe ovela eIndiya wawusezantsi nge-77% kwi-2020 xa ithelekiswa ne-2019, ngelixa inkcitho yayingaphantsi kwe-45%. NgoJuni 2021, uhambo lwabahambi lomoya bangaphandle kwiindawo ezingamisi ukusuka eIndiya ukuya e-US behle ngama-59% xa kuthelekiswa noJuni 2019.
Iprofayile yoTyelelo lwaseIndiya
Kunyaka oqhelekileyo, amazwe ali-18 afumana iipesenti ezi-2 okanye ngaphezulu kwevolumu yeendwendwe zaseIndiya. Oku kuxhasa iinzame zeBrand USA zokukhuthaza ukhenketho lwamazwe aphesheya oluya kwiindawo ezisemaphandleni okanye ezingaziwayo kangako kulo lonke elaseUnited States njengoko kufunwa nguMthetho wokuKhuthaza uKhenketho. I-63% ityelele ilizwe elinye kuphela ngexesha lotyelelo lwase-US, oluthelekiswa ne-76% kuwo onke amazwe aphesheya. Kwigumbi lokulala eliqikelelweyo ngezigidi ezili-13 ezibhukishwe ngo-2019, i-India ibeka indawo yesine kubusuku obuninzi kwigumbi kuzo zonke iimarike. Eyona njongo iphambili yokuhamba lishishini kwi-35% yazo zonke iindwendwe kwi-2019-inqanaba lama-3 aphezulu ngaphezulu komndilili kuwo onke amazwe aphesheya. Ezinye iinjongo eziphambili zokuhamba zibandakanya i-VFR (undwendwela abahlobo kunye nezihlobo); iholide / iholide; kunye nendibano, inkomfa, okanye inxaxheba yorhwebo.
Ukuvala intlanganiso ebonakalayo, bekungekho mpendulo icacileyo kumbuzo obalulekileyo: Iya kubekwa nini inyani ngu-real?